MODA | Article Detail | မိန်းကလေးတွေကြားမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ Chunky Hair Highlight ဆိုတာ
မိန်းကလေးတွေကြားမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ Chunky Hair Highlight ဆိုတာ
Fashion တွေ Style တွေက တစ်ပတ် ပြန်လည်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်း 90s ခုနှစ်တွေမှာ ခေတ်စားခဲ့တဲ့ Style တစ်ခုက နိုင်ငံတကာက မိန်းမပျိုလေးတွေကြားမှာ ပြန်လည်ရောက်ရှိလို့နေပါပြီ။ မျက်လုံးထဲမှာမြင်နေတဲ့အရတစ်ခုရှိတယ်မဟုတ်လား..ဟုတ်ပါတယ် Chunky Hair Style ပါ။ Hip Hop အဆိုတော် Mary J. Blige, Spice Girl အဖွဲ့ဝင် Geri တို့ကို ၉၀ ပြည့်နှစ်တွေတုန်းက ဒီ Hair Style နဲ့ မြင်တွေ့ရမှာပါ။ ဒီနှစ်မှာ Scrunchie လေးတွေ ခေတ်စားပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ပေါ်လာတဲ့ Trend တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၂၀ ရဲ့ Chunky Hair ကတော့ အရောင်တောက်တောက်တွေကို ငြိမ်တဲ့အရောင်တွေနဲ့ Opposite တွဲစပ်တဲ့ပုံစံပါ။
Instagram တွေ၊ Tik tok တွေမှာကအစ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက Celebrity တွေအဆုံး ဒီ Trend ကို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် စီးမျောလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Chunky Hair တွေကို Dua Lipa, Jennie Kim, Kylie စတဲ့ နာမည်ကြီး Celeb တွေ ပုံစံမျိူးစုံ ပြုလုပ်ထားတာ တွေ့ရမှာပါ။ မျက်နှာကို Framing လုပ်ပေးပြီး တစ်ခေါင်းလုံး ဆိုးစရာမလိုပဲ အမျိုးမျိုးဖန်တီးနိုင်တာမို့ လူကြိုက်များလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုးဖို့ စိတ်ကူးရှိနေတဲ့သူတွေအတွက် အခုဖော်ပြပေးမယ့် Hair Style တွေက Inspiration ဖြစ်စေမှာပါနော်။
ရှိရင်းစွဲထက်အရွယ်ပိုကျစေမယ့် Hairstyle အလွဲများ
ကိုယ်ကဘယ်လိုစတိုင်လ်နဲ့လိုက်ဖက်တယ် ၊ အသက်အရွယ်အလိုက် ဘယ်လိုအရာကကိုယ်နဲ့သင့်တော်မယ်ဆိုတာကို သေချာရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်တတ်တဲ့ အမျိုးသမီးမျိုးကသာ တကယ်စမတ်ကျတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးလို့ဆိုရမှာပါ။ အမျိုးသမီးတိုင်းကလှချင်ကြတာမှန်ပေမယ့် ဘယ်လိုအရာကကိုယ့်ကိုပိုပြီး လှပပေါ်လွင်အောင်ထိန်းညှိပေးနိုင်မယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့သူကတော့ အတော်လေးရှားပါတယ်။ ရှိရင်းစွဲထက်ပိုပြီး လှပနုပျိုအောင် ဈေးကြီးပေး ၊အသားနာခံ ၊အန္တရာယ်ဖြစ်စေမယ့် ဓာတုဆေးဝါးတွေသောက်ပြီး ကြိုးစားကြတာထက်စာရင် ငွေကုန်ကြေးကျမများ အသားနာခံစရာမလိုပဲ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဒုတိယမျက်နှာလို့ဆိုရမယ့် ဆံပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် အချက်လေးတွေကိုလိုက်နာရုံနဲ့ ကိုယ့်ကိုအများကြီးပြောင်းလဲနုပျိုသွားစေနိုင်တယ်ဆိုတာ အမျိုးသမီးတိုင်း သိထားဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဘယ်လိုအချက်လေးတွေကများ ကိုယ့်ကို ရှိရင်းစွဲထက်ပိုနုပျိုစေပြီး ဘယ်အချက်တွေကတော့ ပိုပြီးအိုမင်းစေနိုင်တယ်ဆိုတာကို အောက်ကအချက်လေးတွေမှာ တချက်လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
1. အလယ်ခွဲ ဆံပင်ပုံစံ
ဆံပင်ပါးတဲ့သူတွေနဲ့ အသက်အရွယ်ရလာတဲ့သူတွေအနေနဲ့ အလယ်ခွဲဆံပင်ပုံစံဟာ တော်တန်ရုံရှောင်ရှားသင့်တဲ့ ဆံပင်စတိုင်လ်ထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။ အလယ်ခွဲဆံပင်ပုံစံက လိုက်တဲ့သူနဲ့ဆိုရင်အရမ်းလိုက်တယ်ဆိုပေမယ့် ဆံပင်အရမ်းပါးရင်တော့လုံးဝမရွေးချယ်သင့်ပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ ခွဲကြောင်းကအလယ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် အလယ်ကဆံပင်ကိုအုံထူအောင် ဖောင်ဖောင်းလေးလုပ်ထားတာမျိုး ၊ ခပ်ဖွဖွလေးဖြီးတာတာမျိုးလုပ်လို့မရပဲ ပြားကပ်နေတဲ့အသွင်မျိုးကိုပဲဆောင်စေနိုင်တာကြောင့်ပါ။ ဆံပင်ပြားကပ်ကပ်ဖြစ်နေတာမျိုးက လူကိုပိုပြီးအသက်ရတဲ့ပုံမျိုးဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့် လူငယ်လည်းဆန်ချင်တယ် ၊ဆံပင်ကလည်းပါးသေးတယ်ဆိုရင်တော့အလယ်ခွဲဆံပင်ပုံစံကို တခါတရံမှသာရွေးချယ်ဖို့အကြံပေးပါရစေ။
2. ခပ်ရိုးရိုး ဆံပင်အရှည်
ဆံပင်အရှည်ပုံစံက လူကိုအိုစေတာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ ဆံပင်အရှည်ကိုမှ အလွှာတွေ ၊ အကောက်တွေ ၊ သေချာပုံသွင်းထားတာမျိုးတွေမပါပဲ ခပ်ရိုးရိုးတဖြောင့်တည်းကြီးဆိုရင်တော့ ရှိရင်းစွဲအသက်ထက်ပိုကြီးတဲ့ပုံကိုပေါက်စေပါတယ်။နိုင်ငံခြားမင်းသမီးတချို့ ဆံပင်အရှည်အလယ်ခွဲနဲ့အရမ်းကိုကျက်သရေရှိပြီးလှနေတယ်ဆိုတာမှန်ပေမဲ့ သူတို့က မိတ်ကပ်တွေနဲ့ မီးရောင်တွေအောက်မှာနေတဲ့သူတွေမို့ ပိုလှနေတာဖြစ်နိုင်သလို သဘာဝအလင်းရောင်အောက်မှာ အပြင်သွားရမယ့် ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်မလိုက်ဖက်ဆိုတာကိုတော့ အရင်ဆုံး တချက်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင် ဆံပင်အရှည် အလယ်ခွဲပုံစံက ကျော့ရှင်းလွန်းပြီး မျက်နှာကို ပေါ်လွင်စေတာကြောင့် ကိုယ့်မျက်နှာမှာ အရေးအကြောင်းတချို့များရှိနေခဲ့ရင် အဲဒီနေရာတွေကိုပိုပြီး အာရုံစိုက်မိစေနိုင်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
3. ဆိုးဆေး အရောင်ရဲ့လှည့်ကွက်
အသက်အရွယ်ရလာတဲ့အခါ ဆံပင်ဖြူတွေထွက်လာတတ်တာကြောင့် ဆံပင်ဆေးဆိုးဖို့ကလည်း စဉ်းစားရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလိုဆံပင်ဆေးဆိုးတဲ့အခါ ပိုပြီးနုတဲ့ပုံပေါက်အောင်ဆိုပြီး ဆံပင်အရောင်ရင့်ရင့် အထူးသဖြင့် အနက်ရောင်ဆိုးဆေးတွေကို ဆိုးတတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ဆံပင်ပညာရှင်တွေရှာဖွေတွေ့ရှိထားတဲ့ အချက်တချက်ကတော့ ဆိုးဆေး အနက်ရောင်တစ်ခေါင်းလုံးဆိုးထားခြင်းက မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့ အရေးအကြောင်းတွေကိုပိုပြီးပေါ်လွင်စေတဲ့အပြင် ပိုပြီးလည်းအာရုံစိုက်မိစေပါတယ်တဲ့။ ဆံပင်အရောင်ဖျော့ဖျော့တွေဆိုးမှသာ ကိုယ့်မျက်နှာပေါ်က အိုမင်းစေတဲ့အရာတွေကို မှေးမှိန်သယောင်ဖြစ်သွားစေပြီး ပိုနုနယ်တဲ့ပုံကိုပေါက်စေပါတယ်။
ဆိုးဆေးအရောင်ဖျော့ဖျော့က လူကိုပိုပြီးနုနယ်စေတယ်ဆိုပေမယ့် အရမ်းဖျော့လွန်းတဲ့အရောင်တွေ ရွေးချယ်မိမယ်ဆိုရင်တော့ အမှားကြီးမှားနိုင်ပါတယ်။ ဆံပင်အရောင်ဖျော့ဖျော့ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါ ကိုယ့်အသားအရောင် Tone color နဲ့အရမ်းမကွဲပြားတဲ့ အရောင်မျိုးကိုရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ့်မျက်နှာကို ပိုပြီးလင်းသွားစေမယ့် ဆံပင်အရောင်ကို သေချာလေးရွေးချယ်တတ်မှသာ ရှိရင်းစွဲထက် အသက်ပိုကြီးတဲ့ ပုံမျိုးမပေါက်စေမှာအမှန်ပါပဲ။
လူတစ်ယောက်က နေ့တိုင်း အစားအသောက်တစ်မျိုးတည်းစားဖို့ ၊ ဇာတ်ကားတစ်ကားတည်းကိုပဲ အမြဲ ကြည့်နိုင်ဖို့မလွယ်သလို ဆံပင်ပုံစံတစ်မျိုးတည်းပဲ အမြဲတမ်းထားမယ်ဆိုတာကလည်း အရမ်းကို ပျင်းဖို့ကောင်းတဲ့ အတွေးအခေါ်တစ်ခုပါပဲ။ ပြောင်းလဲသင့်တဲ့အချိန်မှာပြောင်းလဲလိုက်တာက စိတ်ရောလူရောအသစ်ဖြစ်စေသလို ကိုယ့်ကို မြင်ရတာလည်း မတူတဲ့စတိုင်အသစ်ကိုခံစားရစေတာကြောင့် ပိုပြီးငယ်ရွယ် နုပျိုသွားသယောင်အထင်ရောက်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဆံပင်ပုံပြောင်းဖို့ကို တင်းခံမနေပဲ Hair Stylist ကောင်းကောင်းတစ်ယောက်ဆီမှာသွားပြီး အရင်နဲ့မတူတဲ့ ခပ်လန်းလန်းစတိုင်တစ်ခုကို ပြောင်းလဲလိုက်ပါ။ ကိုယ်နဲ့ဘယ်လိုပုံစံကလိုက်ဖက်မယ် ဘယ်လိုပုံစံကပိုပြီးနုပျိုသွားစေနိုင်မယ်ဆိုတာကိုတော့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ Hair Stylist ကောင်းကောင်းတစ်ယောက်က သူ့ပညာနဲ့ပုံဖော်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်။
#Light Hair Color
ကိုယ့်မျက်နှာနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ Highlight ကာလာကို ဘယ်လိုရွေးချယ်ကြမလဲ
Trend ဖြစ်တိုင်းလျှောက်ဆိုးမနေပဲ ကိုယ့်မျက်နှာနဲ့ လိုက်မလိုက်အရင်ကြည့်ဦး
၂၀၂၀ ကတော့ Highlight တွေရဲ့ခေတ်လို့ပြောရမလိုပါပဲ။ Dua Lipa နဲ့ Jennie Kim တို့ရဲ့ Chunkie Highlight တွေကအရမ်းခေတ်စားလာသလိုပဲ 1990’s Spices Girl တို့ရဲ့ Hairstyle တွေကလည်းတစ်ကျော့ပြန်လာပြီနော်။ Professional Hair Salons တွေမှာလည်း Hair Color Shading နဲ့ Highlight တွေက Demand အဖြစ်ဆုံး Trend ဖြစ်လာပါပြီ။
အရမ်းမိုက်တဲ့ Hairstyle တစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် Trend တစ်ခုကိုမလိုက်ခင်မှာ ကိုယ်ရဲ့ မျက်နှာကျနဲ့အဆင်ပြေမပြေ၊ လိုက်ဖက်မှုရှိမရှိအရင် လေ့လာပြီးမှ Change ဖို့မမေ့နဲ့နော်။ ကာလာသစ်နဲ့ လန်းချင်သူလေးတို့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ မျက်နှာ၊ Skin Tone အပေါ်မူတည်ပြီး ဘယ်လို Hig ကာလာတွေကို ဆိုးရင် မိုက်လဲဆိုတာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Shades of Brown တွေကတော့ Asian မိန်းကလေးတိုင်းနဲ့လိုက်ဖက်သလို ဘယ်လို မျက်နှာအနေအထားနဲ့ဖြစ်ဖြစ် လိုက်ဖက်ပါတယ်။ Highlight ကာလာလည်း ပြောင်းချင်တယ်၊ အရမ်းကြီးလည်း ထင်းထင်းကြီးမဟုတ်ပဲ မသိမသာလေးပဲ ဆိုးချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် Chocolate Brown ကာလာက အသင့်တော်ဆုံးပါ။
2020 Highlight ထဲမှာ Hot အဖြစ်ဆုံးကာလာဖြစ်ပြီး မိန်းကလေးတိုင်းတောင်းဆိုကြတဲ့ ကာလာပါ။ Smokey Ash Grey က ကြည့်လိုက်ရင် အရမ်း Outstanding ဖြစ်တဲ့ကာလာလို့ထင်ရပေမယ့် ဆိုးလိုက်ရင် Everyday မှာလည်း ကြည့်ရတာအရမ်း အမြင်မရိုင်းပါဘူး။ Face Shape ဆိုရင် Oval Face နဲ့ Rectangle Face လို မျက်နှာမျိုးနဲ့ပိုလိုက်ဖက်ပါတယ်။ တစ်ချို့က Ash Grey ကို အသားညိုသူတွေနဲ့ မလိုက်ဖက်ဘူးပြောပေမယ့် အညိုဆင်လေးတွေဆိုးလည်း ကြည့်ကောင်းပါတယ်။
အညိုကိုမှ Soft Blond Ombre လေး Highlight တင်တာကလည်း တည်ငြိမ်ပြီး Classic ဖြစ်တဲ့ Look ကိုပေးပါတယ်။ ဘယ်လို Outfit မျိုးနဲ့မဆိုလိုက်ဖက်သလို Earrings လေးတွေနဲ့ Accessorize လုပ်ရင် အရမ်း Fashionable ဖြစ်ပါတယ်။ Asian အသားအရည်တော်တော်များများနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ Highlight ဖြစ်ပြီး Filipinas တွေအရမ်းဆိုးကြတဲ့ ကာလာပါ။ Round Face၊ Heart-Shaped Face နဲ့ Oval Face တွေက ဒီ Blonde Ombre ကာလာကို Try ကြည့်သင့်ဆုံး Face ပိုင်ရှင်တွေပါ။
ဒီလို အညိုမကျ၊ ရွှေရောင်မကျ Golden Brown ကာလာလေးတွေက အညိုဆင်လေးတွေ၊ Tanning Skin လေးတွေအတွက် အရမ်း ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ကာလာလေးတွေလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒီလို Highlight ကာလာမျိုးဆိုရင် Make-Up ကိုလည်း Natural/Dewy Look မျိုးလေးပြင်ဆင်ရုံနဲ့လုံလောက်ပါတယ်။
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Pastel လေးတွေကိုတော့ ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတွေ၊ Different ဖြစ်ချင်သူတွေ Try ကြည့်ရင် နောင်တရစေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် Baby Pink၊ Aqua Blue နဲ့ Lavender Highlight ကသင့်ရဲ့မျက်နှာကို ပိုပြီးလင်းသွားစေသလို၊ စိတ်ကိုလည်း ပိုပြီး တက်ကြွရွှင်လန်းစေပါတယ်။ Pastel ကိုတော့ Fair Skin to Medium Skin အသားအရည်ရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေနဲ့ဆိုပိုပြီးလိုက်ဖက်ပါတယ်။ သူလည်း ဘယ်လို Face Shape နဲ့မဆို အဆင်ပြေတဲ့ ကာလာလေးတွေပါ။
ဒီလို အနီရောင်ဘက်သန်းတဲ့ Copper Highlight တွေကတော့ '90s ရဲ့ Youngster Vibe ကို အပြည့်အဝပေးနိုင်သလို ကိုယ် Styling လုပ်ရင်လုပ်သလောက် အထာကျတဲ့ ကာလာပါ။ မိန်းကလေးဆန်ဆန်လည်း ပြင်ဆင်လို့ရသလို Edgy ဖြစ်တဲ့ Look မျိုးလိုချင်လည်း Okay ပဲ။ ဒီလို Copper ကာလာမျိုးကတော့ အသားဖြူသူတွေနဲ့ ပိုလိုက်ဖက်ပြီး Dark Hair ပေါ်မှာလည်း အလွယ်တကူ Highlight လုပ်လို့ရတာကြောင့် အရမ်းခေါင်းစားစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။
ဆံပင်အတိုညှပ်မယ့်သူတွေ Try ကြည့်သင့်တဲ့ အမိုက်ဆုံး French Bob Hairstyle များ
အခုလည်း ဆံပင်ရှည်တွေကနေ ဆံပင်အတိုလေးတွေပြန် ခေတ်စားလာပြီနော်။ အတိုကိုမှ Pixie Cut လို ယောင်္ကျာလေးဆန်ဆန်အတိုလေးတွေရှိမယ်၊ ပခုံးကျော်ကျော် Lob Hairstyle လေးတွေရှိမယ်၊ ဂုတ်နားလောက်အထိ Bob Style လေးတွေရှိမယ်။ အဲ့ထဲမှာမှ လူကြိုက်အများဆုံးနဲ့ အားလုံးနဲ့ လိုက်ဖက်တာကတော့ Bob Hairstyle လေးတွေပါ။ Bob Hair လေးတွေက တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Look ကိုပေးသလို၊ တမှုထူးခြားအောင် ပြင်ဆင်လိုက်ရင်လည်း ခပ်မိုက်မိုက် ကောင်မလေးတစ်ယောက်အသွင်ဖြစ်အောင် ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
Bob Hair နဲ့ပတ်သက်ရင် နာမည်ကျော်တာကတော့ ပြင်သစ်ပျိုမေတွေရဲ့ French Bob လေးတွေပါ။
ကပ်ကြီးပြီးလို့ အပြင်ပြန်ထွက်ရင် စတိုင်အသစ် ဆံပင်ပုံစံအသစ်နဲ့ ဖြစ်နေချင်တာကလည်း အားလုံးရဲ့ ဆန္ဒပဲမလား။ အဲ့တော့ ဆံပင်ကို Hairstyle အသစ်ပြောင်းတော့မယ်ဆိုရင် ဒီလို French Bob လေးတွေက Try ကြည့်သင့်ဆုံး Haircut လေးတွေပါ။ French Bob လေးတွေထဲက ညှပ်ဖို့စဉ်းစားနေပြီဆိုရင် အောက်မှာပြထားတဲ့ Look လေးတွေထဲက တစ်ခုသာညှပ်ကြည့်လိုက်တော့နော်။
Taylor Lashe Haircut
French Bob အတွက် Inspiration ရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ Instagram It-girl လေး Taylor Lashe ရဲ့ Bob Hair ကတော့ Perfect ပါပဲ။ Taylor က Short Hair နဲ့ လည်းအမိုက်စား ဖက်ရှင်တွေကို ဝတ်လို့ရတယ်ဆိုတာ သက်သေပြခဲ့သူလေးပါ။
Short French Bob
ဒီ Haircut ကတော့ ပုံမှန် Bob တွေထက်တိုတယ်ဆိုပေမယ့် ညှပ်လိုက်ရင် တကယ်မိုက်ပြီး Fashionista Look ကိုအပြည့်အဝပေးပါတယ်။ သူက နားအောက်အထိတိုတာမို့ Oval Shape မျက်နှာပိုင်ရှင်တွေနဲ့ဆို ပိုလိုက်ဖက်ပါတယ်။
Kaia Gerber Bob
Natural ကောက်သားကြီးကြီးလေးနဲ့ Kaia Gerber ရဲ့ Bob Hair ကလည်း မော်ဒယ်တွေတော်တော်များများညှပ်လေ့ရှိတဲ့ Bob Hairstyle လေးပါ။
Messy French Bob
ဆံပင်တွေပွပွလေးနဲ့ Messy ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ Messy French Bob လေးတွေကလည်း Arts and Fashion ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ မိန်းကလေးအများစု နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ဒီလို Messy French Bob မှာ Highlight လေးတွေ Color Shades လေးတွေထပ်ထည့်ရင်လည်း အထာကျတယ်နော်။
ဆံမြိတ်တိုတို နဲ့ Baby-Bangs တွေကို Bob Hairstyle နဲ့တွဲဖက်လိုက်တာကလည်း Unique ဖြစ်ပြီး Aesthetic ဖြစ်တဲ့ Vibe ကိုပေးပါတယ်။
Blunt French Bob
ဒီဆံပင်ကတော့ ဘယ်လိုမျက်နှာအနေအထားပဲရှိရှိ၊ ဘယ်လို အသားအရောင်ပဲရှိရှိ လိုက်ဖက်တဲ့ ဆံပင်လေးပါ။ သူ့ရဲ့ Sophisticated Look လေးက ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ် Fresh ဖြစ်နေတာမို့ ဘယ်တော့မှ မတိမ်ကောသွားတာမှာမဟုတ်ပါဘူး။
Grown Out Bob
Bob ကို အရမ်းတိုတို မညှပ်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်း ဂုတ်ထောက်တဲ့ Bob အရှည်လေးကို ထားကြည့်လို့ရပါတယ်။ ဒီလို Grown-Up Bob လေးတွေက ကပိုကရိုလေးနဲ့ Sexy ဖြစ်ပါတယ်။
#French Bob Hair
ခေါင်းမလျှော်ထားတဲ့နေ့ရက်တွေမှာ ယုံကြည်မှုရှိစေမယ့် Hair Style များ
ဒီ Article လေးကို ထောက်ကြည့်တယ်ဆိုကတည်းက ခေါင်းလျှော်ထားတာ ဘယ်နေ့ကလဲ? မှန်မှန်ဖြေနော်။ ဒီတစ်လောကတော့ ရုံးတွေဖွင့်ပြီဆိုပေမယ့်လည်း အိမ်ထဲမှာသာ တတ်နိုင်သလောက်နေရတဲ့ အချိန်ပဲမို့ ခေါင်းလျှော်တာ၊ တစ်နေ့ ရေနှစ်ခါချိူးတာတွေက ပကာသနတွေနော်။ Hair Stylist တော်တော်များများကတော့ ဒီအချိန်က ခေါင်းကို အနားပေးရမယ့်အချိန်ပါလို့ ပြောကြပါတယ်။ ခေါင်းလျှော်ရည်ကလည်း Chemical ပါတာပဲမို့ ဦးရေပြားနဲ့ တတ်နိုင်သလောက် မထိတွေ့တာက အကောင်းဆုံးပါ။
ဒါပေမယ့်လည်း ဦးရေပြားအဆီပြန်ချွေးထွက်ပြီး ဆံပင်တွေကပ်ကပ်ကြီးဖြစ်နေတာကလည်း အပြင်ထွက်ရတော့မယ်အချိန်တွေဆို စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းနေမှာပါ။ ခေါင်းလျှော်ရမှာ ပျင်းတဲ့နေ့တွေမှာလည်း အလွယ်တကူပြင်ဆင်လို့ရမယ့် Hair Style ကလည်း လိုနေပြန်တော့..အခုဖော်ပြပေးမယ့် ဆံပင်ပုံစံလေးတွေက ခေါင်းမလျှော်ထားတဲ့နေ့တွေအတွက် အသုံးဝင်မှာ သေချာပါတယ်။ ကဲ ကိုယ်အကြိုက်ဆုံးပုံစံလေးကို ရွေးပြီး အချိန်မှီလှလိုက်ရအောင်နော်။
Hair Claw ကတော့ အိမ်မှာလည်း ဆံပင်တွေ ရှုပ်နေရင် သုံးနေကျဖြစ်မှာပါ။ ဒါမယ့် အပြင်ထွက်ရမယ့်အချိန်တွေမှာတော့ အမိုက်စားဖြစ်နေအောင် Hair Claw ကို အမိုက်စားရွေးချယ်ဖို့လိုပြီး စတိုင်ကျအောင် လျော့တိလျော့ရဲလေးပုံစံလေး ထုံးဖွဲ့ဖို့လိုမယ်နော်။ မဟုတ်ရင်တော့ ကိုယ့် အမေတွေ၊ အဘွားတွေလို ဟင်းချက်၊ အဝတ်လျှော်စတိုင်ဖြစ်သွားမှာမို့ပါ။
Ponytail တွေကလည်း အရေးပေါ်အခြေအနေတွေအတွက် အမြန်ဆုံးပြင်ဆင်မှုလေးပါ။ ခပ်မြင့်မြင့် Ponytail က ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့ ကောင်မလေးလေးအသွင်ကိုဆောင်စေပြီး Accessory အနေနဲ့ နားကပ်ခပ်ကြီးကြီး တပ်ဆင်ဖို့ပါ။
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးထသွားထလာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လျောက်သွားမယ့်အချိန်လေးမှာ အမိုက်စားအသွင်ဖြစ်နေစေမှာပါ။ ဆံပင်တစ်ဝက်ကိုပဲ ယူပြီး ထုံးလိုက်တာမို့ လူငယ်ဆန်ဆန်လှနေစေမှာပါ။
ရုံးတက်ရမယ့်နေ့တွေမှာ အိပ်ရာထနောက်ကျလို့ ခေါင်းမလျော်လိုက်ရတဲ့အဖြစ်တွေ အမြဲကြုံဖူးကြမှာပါ။ ဒီလိုအချိန်မှာ မြန်မြန်နဲ့ အလှပိုသွားစေမယ့် နည်းလမ်းကတော့ ခပ်လျော့လျော့ Neck Bun တွေပါ။ Office Wear တွေနဲ့ လိုက်ပြီး Fashion လည်းကျတဲ့အပြင် Classy Look လေးကို ပေးတာကြောင့် ရုံးဝန်ထမ်းမမတွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံးပါ။
High half up half down
လူငယ်မိန်းကလေးတွေနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ပြင်ဆင်မှုလေးပါ။ ဓာတ်ပုံပဲရိုက်ရိုက်၊ အပြင်ပဲ မုန့်ထွက်စားစား တစ်နေကုန် အလှမပျက်၊ ယုံကြည်မှုအပြည့်ဖြစ်နေစေမယ့် Hair Style လေးပါ။
ရုတ်တရက် သွားစရာ၊ လာစရာရှိတဲ့အခါမှာ ခေါင်းမလျော်ထားတဲ့ ဆံပင်တွေကို အချိန်မှီ ဖုံးကွယ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးတစ်ခုပါ။ အဆီပဲပြန်နေ၊ အနံ့အသက်ပဲထွက်နေနေ ဦးထုပ်လေးဆောင်းလိုက်တာက ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ အလွယ်ကူဆုံးပြင်ဆင်မှုတစ်ခုဖြစ်နေမှာပါ။
ကဲ ညနေဘက် Dinner တွေ၊ Party တွေသွားတော့မယ်အချိန်တွေမှာ ခေါင်းမလျော်ထားတဲ့ဆံပင်တွေကို ဘယ်လိုပြင်ဆင်ကြမလဲ။ ဒီလို Slice Back ဆံပင်ပုံစံက အဆီပြန်နေတဲ့ ဆံပင်ကို အမိုက်စားအသွင်ပြောင်းလဲစေနိုင်မှာ အသေအချာပါ။ တစ်ခုသတိထားရမှာက Hair Spray တွေ၊ Hair Wax တွေကို အများကြီး အသုံးမပြုမိဖို့ပါ။ မဟုတ်ရင်တော့ ဆံပင်က ပိုပြီးစေးကပ်ကပ်နဲ့ ဂွမ်းသွားမယ့်အဖြစ်ကို မြင်ယောင်ကြည့်နော်။
Messy Bun တွေကတော့ မိန်းကလေးတိုင်းအတွက် အချိန်တိုင်းအကြိုက်တွေ့စရာဖြစ်မယ့် Hair Style လေးတစ်ခုဆိုလည်း မမှားဘူးနော်။ ခပ်မြင့်မြင့် ပွယောင်းယောင်း Messy Bun လေးက ကျောင်းသွား၊ ဘုရားသွားကနေ Show တွေ၊ Club တွေအထိ ကြည့်ကောင်းနေစေမယ့် ချစ်စရာထုံးဖွဲ့မှုလေးပါ။ ခေါင်းမလျော်ထားရင်တောင် လှနေတဲ့ မိမိပါပေါ့။
ခရီးသွားတဲ့အချိန်၊ Day Trip တွေမှာ အသုံးဝင်မယ့် Style ပါ။ ခရီးသွားတဲ့အချိန် ဖုန်တွေ၊ လေတွေကြောင့် ဆံပင်က နေ့တိုင်းညစ်ပေနေမှာမို့ နေ့တိုင်းခေါင်းလျော်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာ ဒီလို Scarf လေးနဲ့ ဆံပင်ကို အလှဆင်တာက ချစ်စရာကောင်းစေတဲ့အပြင် ဆံပင်တွေ ပျက်စီးတာကနေလည်း ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်တာပေါ့။
#Unwashed Hair Tips
#Hair Style Tips
ခေတ်တွေ ပြောင်းသွားလည်း၊ ဘယ်တော့မှ ရိုးအီသွားမှာ မဟုတ်တဲ့ သင်္ကြန် Braided Hair
လူငယ်တိုင်းက အများနဲ့မတူတဲ့ ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ အပြိုင်အဆိုင်မိုက်နေကြတဲ့အချိန်ပါ။
သင်္ကြန်အပြင်အဆင်အကြောင်း ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ သင်္ကြန်မတိုင်ပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ ဈေးသင်္ကြန်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရပါဘူး။ ဈေးသင်္ကြန်လို့လူသိများတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးသင်္ကြန်မှာတော့ လူငယ်တွေ ဒီဇိုင်းကာလာမျိုးစုံနဲ့ လည်ကြပတ်ကြတာပါ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေရဲ့ ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ ပြင်ဆင်မှုနဲ့ လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ အခိုက်အတန့်တွေကို ခံစားရမှာပါ။ မိုးထိမြင့်အောင် ထောင်ထားတဲ့ ကာလာစုံဆံပင်တွေနဲ့ ဈေးပတ်ပတ်လည်က လူတွေနဲ့ အဲ့ဒီအချိန်မှာ တစ်သားတည်းဆိုသလို စတုဒိသာတွေစားကြ၊ ရေလောင်းကြနဲ့ တကယ့်ကို ကြည်နူးစရာကောင်းစေတာအမှန်ပါ။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း သင်္ကြန်ဖက်ရှင်၊ သင်္ကြန်အပြင်အဆင်ဆိုတာကလည်း ရှိနေတော့ ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး A List Celebrity တွေအသွားများပြီး သင်္ကြန်ကျစ်ဆံမြီးမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ တီချို၊ တီခိုင် (Hello Hair & Makeup) တို့နဲ့ သင်္ကြန်တမ်းချင်းလေးကို အတူတူခံစားလိုက်ရအောင်လား။
နှစ်အလိုက်ခေတ်စားလာခဲ့တဲ့ ဆံပင်ပုံစံနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တီချိုက “၈၆၊ ၈၇ တုန်းက ဒိုင်ယာနာကေတွေ ခေတ်စားတယ်။ သဘောၤသားတွေရှိတဲ့ အိမ်မှသာ နိုင်ငံခြား Magazine တွေကြည့်ပြီး လိုက်ညှပ်တာပေါ့။ တစ်ခုခေတ်စားပြီဆို တစ်တိုင်းပြည်လုံး လိုက်လုပ်ကြတဲ့အချိန်ပေါ့။ ၉၀ ကျော်လောက်မှာ ဒယ်ဘီမိုးကေလေး ညှပ်လာကြတယ်။ အဲ့ဒါပြီးတော့ ဟေမာနေဝင်း ဆံပင်ပုံစံလည်း ခေတ်စားလိုက်သေးတယ်။ ပြီးတာနဲ့ ဆံပင်ဖားလျားအရှည်တွေ ခေတ်စားလာတာပေါ့။ တင်နီလာဝင်းတို့၊ စိုးမြတ်သူဇာ တို့ ထက်ထက်မိုးဦးတို့ရဲ့ စတိုင်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေးတွေကြားမှာ အရမ်းခေတ်စားခဲ့တဲ့ ဆံပင်ပုံစံလေးပေါ့။ တက္ကသိုလ်တက်မှပဲ သပ်သပ်ရပ်ရပ် အလှပြင်ကြတာဆိုတော့ သူတို့ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ ဆံပင်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖွာဖွာလေးတွေနဲ့ပေါ့။ ၉၆ ကျော်မှာ စပြီး ဆံပင်ကို အရောင်စဆိုးလာကြတယ်။ ရွှေရောင်ဆိုးတာ ခေတ်စားလာတယ်။ အဲ့ဒီ Blonde Hair ကိုမှ စပရိန်ပုံစံ ကောက်လိုက်ကြသေးတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ဖြောင့်တဲ့ခေတ်ကို ရောက်လာပါရော။ ချည်ပေါင်ရိုးရောင်၊ ခရမ်းနီရောင် ဆံပင်ဖြောင့်ဖြောင့်တွေကို မိန်းကလေးတိုင်းလုပ်ကြတာ မှတ်မိကြမှာပါ။ အင်တာနက်ခေတ်မစားတော့ တစ်ယောက်လုပ်တာတွေ့တာနဲ့ အကုန်လိုက်လုပ်ကြတယ်။ ၂၀၀၀ လောက်ထိ ဒီလိုမျိုးတွေ ခေတ်စားခဲ့တာပေါ့။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်အကျော်မှာ Internet Café တွေခေတ်စားလာတာနဲ့ လူတိုင်းက ခေတ်မှီလာကြတယ်။ Update ဖြစ်တဲ့ဟာတွေ နားလည်ပြီး စမ်းသပ်လာကြတယ်။ ဆိုင်မှာဆိုလည်း Customerတွေကို ဒီလိုလေးတော့လိုက်မယ်၊ ဒါလေးတွေ အဆင်ပြေမယ်ဆိုပြီး ညှိပြီးလုပ်ပေးလာတယ်။ လူတွေကလည်း အကြံပေးစရာမလိုပဲနဲ့တောင် သိလာကြတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ ဖြစ်လာကြတယ်။”
သင်္ကြန်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး Hair Style တွေ ပြောင်းလဲလာပုံကိုလည်း တီချိုက ပြောပြပါသေးတယ်။ “သင်္ကြန်မှာ အရင်တုန်းက ကောက်ကောက်စိုစိုလေးတွေခေတ်စားတယ်။ နောက်ပိုင်းမှသာ ကျစ်ဆံမြီးတွေ စခေတ်စားလာတာပေါ့။ ကျစ်ဆံမြီးကတော့ ပုံစံမျိုးစုံပြုလုပ်ကြပါတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ ဘောလုံးသမားတွေကျစ်တဲ့ပုံစံလေးတွေ ခေတ်စားတယ်။ လိုင်းလေးတစ်လိုင်းနဲ့ ကပ်ကပ်ကလေးတွေပေါ့။ နောက်ပိုင်းမှာ အရောင်စုံကြိုးလေးတွေနဲ့ ကျစ်တာခေတ်စားလာတယ်။ အရှေ့နှစ်တုန်းကတော့ ဖွေးဖွေးနဲ့ မိုးယုစံရဲ့ ကျစ်ဆံမြီးပုံစံ အရမ်းလာကျစ်ကြတယ်။ ကြိုးရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေမှာတောင် ကြိုးတွေပျက်ထွက်ထိနီးပါးရောင်းရတယ်။ ဖွေးအတွက် သူက သင်္ကြန်မလည်ဖြစ်ပေမယ့်လည်း သင်္ကြန်အငွေ့အသက်ရချင်တယ်ဆိုလို့ အိမ်မှာလည်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ တကူးတကမထိန်းသိမ်းရတဲ့ ပုံစံကို ပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ မိုးယုစံအတွက်တော့ မိန်းကလေးဆန်ဆန်၊ ပန်းရောင်လေးနဲ့ လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ သူနဲ့ လည်း အရမ်းလိုက်သွားတယ်။”
Hair Color ပိုင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့လည်း “သင်္ကြန်အတွက် Hair Color ကတော့ မျိုးစုံပဲ။ လူငယ်တွေကတော့ အရောင်စုံဆိုးကြတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းနဲ့ပဲ ထင်ပေါ်အောင် ပြင်ဆင်လာကြပါတယ်။” ကျစ်ဆံမြီးရှိဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့သူဖြစ်ဖြစ်၊ ခုမှ စကျစ်မယ့်သူတွေအတွက်လည်း ဒါလေးတွေက သိထားဖို့လိုပါမယ်။ “ကျစ်ဆံမြီးကျစ်ဖို့အတွက် အဓိကခံနိုင်ရည်ရှိဖို့လိုပါတယ်။ အချောင်းရေနည်းနည်းနဲ့ ကျစ်တာရယ်။ အချောင်းရေအများကြီးနဲ့ ကျစ်တာရယ်ဆိုပြီး နှစ်မျိူးရှိတာပေါ့။ အချောင်းရေများတာက အချိန်ပိုကြာပြီး လေးလည်းလေးတယ်။ ထိန်းသိမ်းရတာလည်း နည်းနည်းခက်တယ်။ သင်္ကြန်နဲ့က အရမ်းလှပေမယ့် ခံနိုင်ရည်သိပ်မရှိတဲ့သူအတွက်ဆိုရင်တော့ မသင့်တော်ဘူးပေါ့။ ခေါင်းနာ သက်သာတဲ့ အချောင်းရေနည်းနည်းနဲ့ ကျစ်တဲ့ပုံစံကတော့ အားလုံးနဲ့ အကောင်းဆုံးပဲ။ တစ်ချိူ့ဆို ကျစ်ဆံမြီးကျစ်ပြီး ဖျားသွားတဲ့သူရှိတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့လိုပါတယ်။ ခေါင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး နာတတ်၊ ကိုက်တတ်တဲ့သူဆိုရင်တော့ အဆင်မပြေပါဘူးလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။”
“ကျစ်ဆံမြီးကျစ်ထားပြီးရင်လည်း ခေါင်းကို ခပ်ပြင်းပြင်းကုတ်တာ၊ ဘီးနဲ့ ဖြီးတာတော့လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်။ သင်္ကြန်မှာ ရေထိပြီးရင်လည်း အိမ်ရောက်တာနဲ့ ခေါင်းကို ရေသန့်နဲ့ လောင်းလိုက်ရင် ရပြီ။ ကျစ်ဆံမြီးစိုစိုနဲ့တော့ အိပ်ရာမဝင်ပါနဲ့။ ကျစ်ဆံမြီးကျစ်ထားတာဖြစ်လို့ ပုံမှန်ဆံပင်ထက်စာရင်တော့ အခြောက်နှေးတတ်တယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ခေါင်းလျော်ထားတဲ့ ဆံပင်တွေလိုပဲ သုတ်မယ်၊ အခြောက်ခံမယ်ဆိုရင် ရပါပြီ။ ရေပိုပြီးစုပ်အောင် ခေါင်းအုံးပေါ်မှာ သတင်းစာလေးခင်းပြီး အိပ်လို့ရပါတယ်။ သတင်းစာက ရေစုပ်တဲ့အတွက် တစ်နည်းအားဖြင့် ခေါင်းမြန်မြန်ခြောက်တာပေါ့။ မဟုတ်ရင် စိုထိုင်းမှုကနေ ဖျားနာတာတွေဖြစ်မှာစိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ ကျစ်ဆံမြီးကျစ်ပြီးလို့ ပြန်ဖြည်မယ်ဆိုရင်လည်း ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြည်လို့ရသလို၊ အချို့စိတ်မရှည်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ ဆိုင်မှာလဲဖြည်လို့ရပါတယ်။ ဖြုတ်ပြီးရင်လည်း ဆံပင်နဲ့ ဦးရေပြားအတွက် Treatment လေးယူပေးပါ။ ပုံမှန်ကတော့ ကျစ်ဆံမြီးကျစ်လို့ ထွေထွေထူးထူးပြဿနာဖြစ်တာတော့ မရှိသေးပါဘူး။” လို့ တီချိုက ဆံပင်ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် နည်းလမ်းလေးတွေလည်း မျှဝေပေးခဲ့ပါတယ်။
မျက်နှာ အနေအထားနဲ့ ဘယ်လိုကျစ်ဆံမြီး ကျစ်ရမလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကိုတော့ “မျက်နှာပြည့်တဲ့သူ၊ ဝိုင်းတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ ရှေ့ဆံပင်နည်းနည်းချန်ပြီး ကျစ်ပေးလေ့ရှိတယ်။ ဆံပင်နည်းတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ ကြိုးများများလေးနဲ့ ကျစ်ပေးတာပေါ့နော်။” လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
တီခိုင်ကလည်း မိတ်ကပ်၊ အသားအရေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ “သင်္ကြန်အတွင်း နေပူပူ၊ ရေတွေ အချိန်ပြည့်ထိနေရမယ့် အသားအရေအတွက် Sunscreen လေးတစ်ဘူးတော့ မဖြစ်မနေလိုပါတယ်။ ကိုယ်လွယ်သွားမယ့်အိတ်လေးထဲမှာ ဘူးလေးတစ်ဘူး ထည့်သွားလိုက်ပေါ့။ အသားအရေအတွက်ကိုတော့ သင်္ကြန်ပြီးမှပဲ ထိန်းသိမ်းတာက ပိုပြီးကောင်းပါတယ်။ သင်္ကြန်မှာ မိတ်ကပ်လိမ်းမယ်ဆိုရင် Waterproof လေးတွေ ခံမယ်။ Moez က Sun gel လေးကို တောက်လျှောက်လိမ်းပေါ့။ အဓိကကတော့ Waterproof Product လေးသုံး၊ ကိုယ်သုံးနေကျ Sunscreen၊ Sun gel လေးသုံးပေ့ါ။”
သင်္ကြန်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လူငယ်တွေ အများဆုံးလုပ်ဖြစ်တဲ့အလှအပအကြောင်းအရာတွေကိုလည်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ “အရင်နှစ်တွေတုန်းကတော့ သင်္ကြန်မတိုင်ခင် မျက်တောင်အရမ်းလာဆက်ကြတယ်။ အဓိက ရေစိုလည်း မျက်နှာလေးပေါ်နေစေတဲ့အတွက် လူကြိုက်များတာပေါ့နော်။ တစ်ပင်ချင်းဆက်တာရှိတယ်၊ အစုလိုက်ဆက်တာရှိတယ်။ ဆိုတော့ မျက်နှာပေါက်နဲ့ လိုက်၊ မလိုက်ကြည့်ပြီးမှပဲ လုပ်ပေးဖြစ်တာများတယ်။ အရင်တုန်းကဆို Eye shadow တောက်တောက်၊ နှုတ်ခမ်းနီတောက်တောက်တွေ ပြင်ကြတယ်။ ဒါမယ့် ခုနောက်ပိုင်းကတော့ အဲ့လို Heavy ကြီးတော့ မလုပ်ကြတော့ဘူး။ အမအနေနဲ့ အကြံပေးရမယ်ဆိုရင် Waterproof Eyeliner လေးခြယ်၊ မျက်တောင်လေးဆက်ထား၊ ပါးနီရဲရဲလေးခြယ်ထားလိုက်ရင် သဘာဝဆန်ဆန် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးလှနေမှာပါ။ အဓိကတော့ Foundation အများကြီးလိမ်းတာကို လျော့ခိုင်းစေချင်တယ်။ အဓိကက သင်္ကြန်မှ မဟုတ်ဘူး..အပူချိန်များတဲ့ နွေရာသီဖြစ်တာကြောင့် မျက်နှာကိုပြင်ဆင်သလိုပဲ..လည်ပင်းနဲ့ အခြား အစိတ်အပိုင်းကိုလည်း ကာကွယ်ဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ကိုယ်သယ်သွားလို့ရမယ့် Sunscreen ကို အမြဲတမ်းဆောင်ထားပါ။ တီခိုင် ကတော့ Moe z ရဲ့ sun gel လေးကို Recommend ပေးချင်ပါတယ်။ ပြာတာ၊ စေးကပ်တာ၊ ပူစပ်တာတွေ မဖြစ်တဲ့အတွက် အရမ်းကြိုက်တယ်။
သင်္ကြန်မှာ ပျက်စီးသွားတဲ့ အသားအရေကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ကိုလည်း “သင်္ကြန်ပြီးသွားရင်လည်း Body Treatment Face Treatment တွေကိုသေချာလုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ ဆိုင်မှာလည်း သင်္ကြန်ပြီးရင် အရမ်းလာလုပ်ကြတယ်။ သင်္ကြန်တွင်းက ပျက်စီးထားတဲ့ မျက်နှာနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က မဖြစ်မနေထိန်းသိမ်းရမှာပါ။ ပုံမှန် Body Treatment ကို တစ်ခါမှ မလုပ်ဘူးသေးတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ တစ်လကို နှစ်ခေါက်တော့ ပြုလုပ်စေချင်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ တစ်လတစ်ခေါက်နှုန်းနဲ့ သွားရင် အဆင်ပြေပါတယ်။ အဓိက ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ အသားအရေကို ကြည်လင်သန့်စင်စေပြီး Skin အသစ်အတိုင်းဖြစ်သွားစေလို့ပါ။ Spa တွေ၊ Salon တွေမှာ လုပ်နိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။ ကိုယ်ပုံမှန်လုပ်နေကျထက် ပိုမိုထိရောက်ပြီး ပေါ့ပါးတဲ့ခံစားချက်ကိုရရှိမှာပါ။”
သင်္ကြန်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့လည်း တီချိုနဲ့ တီခိုင်ရဲ့ အမြင်က “သင်္ကြန်က လွတ်လပ်ပေါ့ပါးတယ်၊ ဒီဇိုင်းမျိုးစုံ၊ ကာလာမျိုးစုံ ပြင်ဆင်နိုင်တယ်။ ဒီအချိန်က ကဲ့ရဲ့တာဘာတွေလည်းမရှိဘူး။ Hair Style အနေနဲ့ကတော့ ကျစ်ဆံမြီးက ဘာတွေ ဘယ်လိုပဲ ခေတ်စားနေ လုပ်နေကြအုံးမှာပါ။ ကာလာတွေ တွေ့ရမယ်။ မိတ်ကပ်ဆိုလည်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးတွေက သင့်တော်ပါတယ်။”
ကဲ သင်္ကြန်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အမှတ်ရစရာတွေ၊ ဗဟုသုတတွေရလို့ ကျေနပ်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒီနှစ်ကတော့ ရေမစိုတဲ့ သင်္ကြန်ဖြစ်တာကြောင့် အားလုံးဝမ်းနည်းနေကြမှာဆိုပေမယ့်လည်း ရောဂါကာကွယ်တားဆီးခြင်းအတွက် အိမ်ထဲမှာနေတာက အကောင်းဆုံးပါ။ နောက်နှစ်သင်္ကြန်ကိုတော့ ဒီနှစ်အတွက်ပါ အတိုးချပြီး အစွမ်းကုန်ပျော်ကြရအောင်နော်။
နွေရာသီမှာ ဆံပင်တိုတို အထာကျကျနဲ့ လှပကြစေဖို့
ဒီလိုပူအိုက်တဲ့ရာသီမှာ ဆံပင်အတိုထားဖို့ မဝံ့မရဲဖြစ်စရာမလိုတော့ပါဘူး
အခုဆိုရင် ရာသီဥတု အနေနဲ့ကလည်း ပူပြင်းခြောက်သွေ့တဲ့ နွေကာလကို စတင်ချည်းနင်းဝင်ရောက်လာပါပြီ။ ဒီလို ပြင်းပြလှတဲ့ နေရောင်ခြည်ရဲ့ အပူရှိန်အောက်မှာ အပူဒဏ်ကိုမခံစားနိုင်တဲ့ မိန်းကလေးတွေတော်တော်များများ ဆံပင်ကို အတတ်နိုင်ဆုံး ခပ်တိုတိုလေးတွေညှပ်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီလို ဆံပင်အတိုလေးတွေကိုညှပ်ပြီးကြတဲ့အခါ တစ်နေ့တစ်မျိုးမရိုးအောင် ဘယ်လိုဆက်ပြီး ပုံသွင်းရမလဲဆိုတာ မိန်းကလေးတချို့အတွက် ခေါင်းစားစရာကိစ္စတစ်ခုပါပဲ။ဒါကြောင့်မို့ ဆံပင်တိုတဲ့ မိန်းကလေးတွေအတွက်ရော ဆံပင်အတိုညှပ်ချင်ပေမယ့် လှပါတော့မလားလို့စိုးရိမ်နေတဲ့မိန်းကလေးတွေပါ အဆင်ပြေပြေနဲ့ အလှဆုံးထုံးဖွဲ့ပုံသွင်းနိုင်မယ့် ဆံပင်အတိုပုံစံလေးတွေကို လေ့လာကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်။
ဆံပင်ကို အိမ်မှာနေရင် ဖြစ်သလိုပဲ လှန်တင်ထားတတ်တယ် အပြင်သွားရင်လည်း လွယ်လွယ်ပဲဆံပင်ကိုလှန်တင်ထားရတာကြိုက်တယ် ။ဒါပေမဲ့ အချိန်ပေးပြီးသေချာလည်းမလုပ်ချင်ဘူး သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေးလည်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် အဆင်အပြေဆုံးကတော့ ထိပ်မှာစုချည်ထားတဲ့ ဆံပင်ပုံစံပါပဲ။ မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ လှလှပပလေးဖြစ်ဖို့အတွက် ဦးခေါင်းထိပ်ကဆံပင်တစ်ဝက်လောက်ကို စုစည်းပြီး အပေါ်မှာဆွဲလိမ်လိုက်ရုံပါပဲ။ပိုပြီးမြဲမြံစေဖို့အတွက် ဆံညှပ်လေးတွေနဲ့ထိန်းပေးထားဖို့တော့လိုမယ်နော်။
ဒီပုံစံလေးကတော့ တော်တော်များများလည်းနှစ်သက်ကြမယ့်ပုံစံလေးပါ။ လှလှပပပြင်ပြင်ဆင်ဆင်ပုံစံနဲ့လည်းလိုက်ဖက်သလို တော်ရုံတန်ရုံဖြစ်သလိုဝတ်သွားရင်တောင် လိုက်ဖက်နေမယ့်ဆံပင်စတိုင်လေးပါပဲ။ စပြီးပုံသွင်းတဲ့နေ့ထက်စာရင် ပုံသွင်းပြီးနောက်နေ့ ခပ်ပွယောင်းယောင်းရှုပ်ရှုပ်လေးဖြစ်နေတာက ပိုပြီးတောင်လှပါသေးတယ်။
ဒီပုံစံလေးကတော့ ဆံပင်အတိုနဲ့ အမြဲတမ်းတွဲဖက်ပြီး မြင်ရနေကျ Best Friend for Short Hair လေးပါ။ အကောင်းဆုံး ကတော့ ဆံပင်ကိုထိပ်မှာ ကျစ်ဆံမြီးခပ်ပွပွကျစ်ပြီး အနောက်ဘက်ကိုဖိချလိုက်တဲ့ပုံစံလေးပါပဲ။ ပြီးရင်တော့ ညှပ်ကလစ်လေးတွေ ဂွကလစ်လေးတွေနဲ့ ခိုင်ခံ့အောင် ထိန်းပေးလိုက်ရုံပါ။ ဒီလို ကျစ်ဆံမြီးခပ်ပွပွလေးကျစ်ပြီး အပေါ်မှာဆံထုံးအသေးလေးလုပ်ချင်လည်းရပါသေးတယ်။
သင့်ရဲ့ သမားရိုးကျ မြင်နေကျပုံစံကနေ အမြန်ဆုံး ပုံပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဆံပင်ကိုဘက်ပြောင်းခွဲလိုက်ရုံပါပဲ။အမြန်ဆုံးနဲ့ အလွယ်ဆုံး ပုံပြောင်းနည်းဆိုတော့ သေချာရှင်းပြဖို့လိုမယ်မထင်ပါဘူးနော်။
5. Accessory လေးနဲ့အလှဆင်
နောက်ထပ် အလွယ်ကူဆုံး ဆံပင်အတိုကို စတိုင်လ်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Accessor လေးတွေပေါင်းထည့်လိုက်ပါ။ ဘီးကုတ် ၊ ကလစ်လှလှလေးတွေနဲ့ ခေါင်းစည်းကြိုးလှလှလေးတွေက ဆံပင်အတိုသမားတွေအတွက် အသက်ပါပဲ။
Photo Credit to Rightful Owners
သန်စွမ်းကျန်းမာတဲ့ ဆံနွယ်ရှည်တွေကို ပိုင်ဆိုင်စေမယ့် နည်းလမ်း (၈)သွယ်
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဒုတိယမျက်နှာဖြစ်တဲ့ ဆံပင်ရဲ့ ကျန်းမာခြင်းကလည်း အလှအပအတွက် အရေးပါတဲ့အချက်တွေထဲကတစ်ခုပါ
မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့ အိပ်မက်ဟာ သန်စွမ်းကျန်းမာတဲ့ ဆံနွယ်ရှည်တွေပါပဲ ။ တချို့တွေကတော့ ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲ အရှည်မြန်ပြီး ကျန်းမာတဲ့ ဆံပင်တွေကို မွေးရာပါ ပိုင်ဆိုင်ကြပေမယ့် အများစုကတော့ ဆံပင်ကျန်းမာသန်စွမ်းဖို့အတွက် ဆံပင်အားဖြည့်ဆေးတွေ ထိန်းသိမ်းဆေးတွေကို မဖြစ်မနေ အသုံးပြုကြရပါတယ်။ အဲဒီလို တန်ဖိုးကြီးတဲ့ ဆံပင်ထိန်းသိမ်းမှူတွေပြုလုပ်တာတောင်မှ ဆံပင်ကထင်သလောက်မသန်စွမ်းလာတဲ့အတွက်လည်း စိတ်ညစ်စိတ်ပျက်ခဲ့ရတာတွေအများကြီးပါ။ တကယ်တမ်းတော့ ဆံပင်ထိန်းသိမ်းတဲ့အခါမှာ ဆေးကောင်းဝါးကောင်းတွေအပြင် မှန်ကန်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေပါပေါင်းစပ်ပါမှ မိမိတို့လိုချင်တဲ့ ကျန်းမာတဲ့ဆံပင်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ။ အဲဒီအတွက် ဘယ်လောက်လုပ်လုပ် အရာမထင်အလုပ်မဖြစ်ဘူးလို့ အထင်ရောက်နေကြတဲ့ ပျိုမေလေးတွေအတွက် ဆံပင်အရှည်မြန်စေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကို စုစည်းတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁ ။ အစားအစာကို သမမျှတစွာစားသုံးပါ
ဦးရေပြားဟာလည်း အခြားခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေလိုပဲ သန်စွမ်းကျန်းမာဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေဖြစ်တဲ့ ပရိုတင်းနဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေ လိုအပ်ပါတယ်။ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း ဆံပင်ပါးခြင်းကိုသက်သာစေဖို့အတွက် ဆံပင်ရဲ့ ကျန်းမာခြင်းကို အထောက်အကူပြုတဲ့ ဗီတာမင် အေ ၊ ဗီတာမင် ဘီ ၊ဗီတာမင် အီး ၊ ဇင့် နဲ့ အိုမီဂါ (3) ၊ ဖောလစ်အက်ဆစ် ၊ ဘိုင်အိုတင် နဲ့ အခြားဒြပ်ပေါင်းများစွာပါဝင်တဲ့ အစားအစာတွေကို မဖြစ်မနေစားသုံးပေးရပါမယ်။ ဒါ့အပြင် ပရိုတင်းဓာတ်ကြွယ်ဝသောအစားအစာတွေဖြစ်တဲ့ ဟင်းနုနွယ်၊ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း ၊ ဗာဒံစေ့ ၊ မြေပဲ ၊သစ်ကြားသီး ၊ဥအမျိုးမျိုးနဲ့ ချိစ်၊ နို့ ၊အသား ၊ ဆယ်လ်မွန်ငါး ၊ထောပတ်သီး စတာတွေကို များများစားသုံးပေးခြင်းဖြင့် ဆံပင်နဲ့ ဦးရေပြားရဲ့ ကျန်းမာသန်စွမ်းခြင်းကို အထူးတလည်အထောက်အကူပြုပေးနိုင်မှာ အမှန်ပါပဲ။
၂ ။ တစ်ပတ်ကို နှစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီး ခေါင်းလျှော်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ
နေ့စဉ်ခေါင်းလျှော်ခြင်းကြောင့် ဦးရေပြားရဲ့ ဆံပင်သန်စွမ်းမှူကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ သဘာဝအဆီဓာတ်ကို ထိခိုက်စေပြီး ခေါင်းလျှော်တဲ့အကြိမ်ရေများလေလေ ဆံပင်အားဖြည့်အဆီဓာတ်ကို လျော့ကျစေလေပါပဲ။ဒါကြောင့်မို့ ခေါင်းလျှော်တဲ့အကြိမ်အရေအတွက်ကို အများဆုံး တစ်ပတ်ကို နှစ်ကြိမ်ခန့်သာ လျှော်သင့်ပါတယ်။ဒါမှသာ ဆံပင်ရဲ့ အာဟာရဓာတ်ဖြည့်အဆီဓာတ်ကို များများထုတ်လွှတ်စေခြင်းဖြင့် ဦးရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်း ဘောက်ထခြင်းတို့ကို ကာကွယ်နိုင်မှာပါ။ ဒါကြောင့်မို့ ဆံပင်ဆိုတာ နေ့စဉ်ခေါင်းလျှော်မှသန့်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးကိုဖယ်ပြီး လျှော်တဲ့အကြိမ်ရေနည်းလေ ပိုသန့်ရှင်းလေဆိုတာကို သတိရသင့်ပါတယ်။
၃ ။ အပူပါတဲ့ဆံပင်ပုံသွင်းပစ္စည်းနဲ့ ဓါတုဆံပင်ပုံသွင်းဆေးတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံးလျှော့သုံးပါ
အပူနဲ့ဆံပင်ပုံသွင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကို မကြာခဏအသုံးပြုခြင်းကြောင့် ဆံသားပျက်စီးခြင်း ၊ ဆံပင်နှစ်ခွဖြစ်ခြင်းနဲ့ ဗောက်ထခြင်းတွေကို ပိုပြီးဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ မဖြစ်မနေသုံးမယ်ဆိုရင်လည်း အပူကိုအတတ်နိုင်ဆုံးလျှော့ချပြီး အပူကာကွယ်ဆေးလိုအရာမျိုးနဲ့ ဆံသားကို အရင်ဖြန်းပြီးမှသာ သုံးသင့်ပါတယ်။ ခေါင်းကိုမကြာခဏဖြီးခြင်းနဲ့ Chemical ပါဝင်တဲ့ ဆံပင်ပုံသွင်းဆေးတွေကြောင့်လည်း ဆံသားကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ Shampoo နဲ့ အခြား Hair Products တွေကို အသုံးပြုတဲ့အခါ ဆံသားထိခိုက်ပျက်စီးမှူ အနည်းဆုံးဖြစ်စေဖို့ ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်ပေါင်း ၊Paraben နဲ့ ဆိုးဆေးမပါတဲ့ ပစ္စည်းမျိုးတွေကိုသာ ရွေးချယ်ဝယ်ယူ အသုံးပြုသင့်တယ်ဆိုတာကို အထူးသတိပြုသင့်ပါတယ်။
၄ ။ ဆံပင်အားဖြည့်ဆေး မှီဝဲပါ
အခုအချိန်မှာဆိုရင် ဆံပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အားဖြည့်ဆေးတွေကို အလွယ်တကူ ဝယ်ယူနိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အမှတ်တံဆိပ်မျိုးစုံ အာနိသင်မျိုးစုံရှိကြတဲ့ အထဲကမှ ကိုယ့်အတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မယ့် ဆံပင်အားဖြည့်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးကို စွဲမြဲသောက်သုံးခြင်းဖြင့် ဆံပင်ရဲ့ကျန်းမာခြင်းကို ရရှိနိုင်မှာပါ။အဒိကအားဖြင့်တော့ ဆံပင်အားဖြည့်ဆေးတွေမှာ ဆံသားနဲ့ဦးရေပြားအတွက်လိုအပ်တဲ့ ဒြပ်ပေါင်းတွေဖြစ်တဲ့ ဗီတာမင် အေ၊ဘီ၊စီ၊အီး၊ သံဓာတ်၊ အိုမီဂါ (3) ၊ဖောလစ်အက်ဆစ်နဲ့ ဇင့်ဓာတ်တို့ အဓိက ပါဝင်တတ်ကြပါတယ်။
၅ ။ ဦးရေပြားကိုနှိပ်နယ်ပေးပါ
ဆံပင်တွေအရှည်မြန်ဖို့အတွက် နောက်ထပ်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့ ခေါင်းကို ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကြားထဲအထိ ငုံ့ပြီး ဦးရေပြားကို နှိပ်နယ်ပေးခြင်းပါပဲ။
ပထမအဆင့်အနေနဲ့ ထူးခြားတဲ့ရလဒ်ရှိမရှိသိနိုင်ဖို့ ဆံပင်ကိုအရင်းကနေ အဖျားထိ တိုင်းတာထားပါ။
ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ ခုံတစ်လုံးပေါ်မှာထိုင်ပြီး ဦးခေါင်းကို ခြေထောက်ကြားထဲ ငိုက်စိုက်ချလိုက်ပါ။ အဲဒီလိုထားခြင်းအားဖြင့် ဦးခေါင်းရဲ့ သွေးလည်ပတ်မှူကိုမြှင့်တင်ပေးပြီး ဆံပင်သန်စွမ်းမှူကို အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
တတိယအဆင့်အနေနဲ့လက်ချောင်းထိပ်ဖျားလေးတွေကိုအသုံးပြုပြီး ဦးရေပြားတစ်လျှောက် ၁၀မိနစ်ခန့်နှိပ်နယ်ပေးပါ။နှိပ်နယ်တဲ့အခါ အုန်းဆီ ၊ သံလွင်ဆီတွေကို အသုံးပြုနှိပ်နယ်ပေးခြင်းက ပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်ကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ဆံသားကိုလည်းနူးညံ့ပျော့ပြောင်းစေမှာပါ။
စတုတ္ထအဆင့်အနေနဲ့ ဆံပင်ကို ခေါင်းလျှော်ရည် ၊ Conditioner အပျော့စားနဲ့ ပြန်လျှော်ပါ။
နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ ဒီနည်းလမ်းကို တစ်ပတ်လောက်ပြုလုပ်ပြီးတိုင်း တစ်လခန့်ရပ်နားပြီးမှ နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လုပ်ဖို့ သတိပြုပါ။
၆ ။ ဆီ သို့မဟုတ် ပေါင်းဆေးသုံးပေးပါ
တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်အနည်းဆုံး ဆီ ဒါမှမဟုတ် ပေါင်းဆေးကို ဦးရေပြားပေါ် လိမ်းကျံပေးခြင်းဖြင့် ဆံသားကို သန်စွမ်းကျန်းမာပြီး တောက်ပစေပါတယ်။အဲဒီလိုအသုံးပြုတဲ့အခါ အုန်းဆီ ၊ ရှားစောင်းလက်ပတ် ၊ သံလွင်ဆီနဲ့ ကြက်ဥလိုမျိုးတွေကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအရာတွေက ဦးရေပြားကို အစိုဓာတ်နဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေ ကောင်းကောင်းပေးစွမ်းနိုင်တာမို့ ဆံပင်ကို သန်စွမ်းတောက်ပြောင်စေပြီး ဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဗောက်ထခြင်းတွေကို ကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်ပေးပါတယ်။ အဲဒီအပြင်ကိုမှ ဆံသားနှစ်ခွဖြစ်ခြင်းနဲ့ ဆံပင်ပျက်စီးခြင်းတွေကိုလည်း ကာကွယ်ပေးဦးမှာပါ။
၇။ ချည်ခေါင်းအုံးအစား ဖဲသားကိုသုံးပါ
ခေါင်းအုံး ဒါမှမဟုတ် ခေါင်းအုံးစွပ်ကို ချည်သားထက် ဖဲသား၊ပိုးသားလို နူးညံ့တဲ့အသားတွေကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဆံသားကြိုးကြေပျက်စီးခြင်းနဲ့ ဆံပင်ပါးခြင်းတွေကိုကောင်းကောင်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဆံပင်ကို လှပသန်စွမ်းစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအချက်လေးကလည်း မဖြစ်မနေ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်အချက်တွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။
၈ ။ ဆံပင်ကို တင်းကြပ်စွာ စည်းနှောင်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ
ဆံပင်တွေပျက်စီးရခြင်းရဲ့ နောက်ထပ်တရားခံကတော့ တင်းကြပ်စွာစည်းနှောင်ခြင်းပါ။ အဲဒီလိုတင်းကြပ်စွာစည်းနှောင်ခြင်းကြောင့် ဆံပင်လည်းကျွတ်နိုင်သလို ဆံပင်ရှည်တာကိုလည်းနှောင့်နှေးစေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဆံပင်စည်းတဲ့အခါ တင်းကြပ်စွာစည်းနှောင်ခြင်းကိုရှောင်ရှားသင့်ပြီး အသုံးပြုသင့်ဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံး ကတော့ စပရိန်ကွင်းလို ခေါင်းစည်းကွင်းလေးတွေပါပဲ။
Valentine's Day အတွက် အရွေးချယ်သင့်ဆုံး ဆံပင်ပုံစံ (၅)မျိုး
ကိုယ့်ချစ်သူရှေ့မှာ အလှဆုံးဖြစ်နေစေဖို့ ဆံပင်ပုံစံလေးတွေ အရွေးမမှားဖို့လည်းလိုတယ်နော်
ကိုယ့်ရဲ့ အရေးပါတဲ့ တစ်စုံတစ်ဦးနဲ့ တွေ့ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ မပြင်မဆင်ပဲ ဖြစ်သလိုသွားမယ်ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးမျိုးကတော်တော်ကိုရှားပါလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့် ချစ်သူများနေ့လို အချိန်မျိုးမှာ ကိုယ်ချစ်ရသူမျက်လုံးထဲမှာ ချစ်စရာကောင်းနေဖို့အပြင် အခြားစုံတွဲတွေကြားထဲ အလှပိုချင်ကြတာ မိန်းကလေးတော်တော်များများရဲ့သဘာဝလို့ဆိုရမှာပါ။ အဲဒီလို အလှအပအတွက်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ ဆံပင်ပုံစံလေးလှဖို့ကိုလည်းချန်လှပ်ထားခဲ့လို့မရပါဘူး ။ ဒီတော့ ဘယ်လိုဆံပင်ပုံစံရွေးချယ်မှူလေးတွေက ချစ်သူများနေ့မှာ ပိုပြီးချစ်စရာအရမ်းကောင်းတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ပံ့ပိုးပေးနိုင်မလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
1 . အသည်းပုံဆံပင်အစည်း
ဒါကတော့ ချစ်သူများနေ့အတွက် အလိုက်ဖက်ဆုံးတစ်ခုလို့တောင်ဆိုလို့ရပါတယ်။ အသည်းနှလုံးပုံစည်းဖွဲ့ထားတဲ့ ဆံပင်ပုံစံလေးက Creative လည်းဖြစ်သလို မိန်းကလေးဆန်ဆန်နဲ့ အရမ်းကိုချစ်ဖို့ကောင်းနေမှာအမှန်ပါပဲ။ ဒီလိုအသည်းပုံလေးရဖို့ အရမ်းခက်ခက်ခဲခဲကြီးတော့လုပ်ယူရမှာမဟုတ်ပေမယ့် ဂရုတစိုက်လေးတော့ ပုံဖော်ယူရမှာပါ။ ဆံပင်ကိုနှစ်ခြမ်းခွဲစည်းပြီး ကျစ်ဆံမြီးလေးလိုကျစ်ပြီးမှအသည်းပုံဖော်တာမျိုးလည်းလုပ်နိုင်သလို ဒီအတိုင်း လှည့်ကျစ်ပြီးတော့လည်း အသည်းပုံလေးဖြစ်အောင်စည်းနှောင်နိုင်ပါတယ်။ ပိုပြီးခိုင်မြဲစေဖို့ ဆံညှပ်ကလစ်လေးတွေ သားရေပင်လေးတွေတော့သုံးပေးရပါမယ်။
2. ဆံထုံးလျော့လျော့ ကျော့ကျော့ရှင်းရှင်း
ရိုမက်တစ်ဆန်ဆန် ညနေခင်းမျိုးလေးအတွက် အလိုက်ဖက်ဆုံးကတော့ မိန်းကလေးဆန်ဆန် သပ်သပ်ရပ်ရပ်ထုံးဖွဲ့ခြင်းမျိုးပါ။ ဆံပင်ကို အနည်းငယ် wavy လေးဖြစ်အောင်ကောက်ပြီး ကိုယ့်မျက်နှာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်အောင် ခပ်ပွပွထုံးဖွဲ့တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် Low Bum လေးချထားတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပြုလုပ်နိုင်ပြီး အရမ်းရိုတဲ့ကိုယ့်ချစ်သူတည်ခင်းကျွေးမွေးတဲ့ ညစာစားပွဲမှာCocktail Dress လှလှလေးနဲ့ ကျော့ရှင်းတဲ့နတ်သမီးလေးတစ်ပါးအသွင်ကိုဆောင်နေစေပါလိမ့်မယ်။
3. တစ်ဝက်စည်း တစ်ဝက်ချ
ဆံပင်ကို တစ်ဝက်စည်းပြီး တစ်ဝက်ကိုချထားတဲ့ပုံမျိုးလေးကလည်း အရမ်းကိုကြည့်လို့လှသလို ကိုယ့်ရဲ့ မိန်းမသားဆန်တဲ့အလှကိုလည်းပိုပြီးပေါ်လွင်စေပါတယ်။ဒီတိုင်းလေးစုပြီးစည်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျစ်ဆံမြီးလေးကျစ်ပြီးစည်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်လို့ရသလို ဆံပင်ရှည်သူဆိုရင် အောက်နားလေးတွေကို ခပ်ဖွဖွလေးကောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ Casual Look နဲ့လည်းလိုက်ဖက်သလို Cocktail Dressနဲ့လည်း အရမ်းကိုလိုက်ဖက်နေမယ့်ဆံပင်ပုံစံလေးဖြစ်တာမို့ ရွေးချယ်သင့်တဲ့ထဲမှာပါပါတယ်။
4. ရိုးမသွားနိုင်တဲ့ အလယ်ခွဲအလှ
အလှပြင်တာလွန်ပြီး သူနဲ့ချိန်းထားတာ အရမ်းကိုအချိန်နောက်ကျနေပြီ ဆံပင်ကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာဗျာများနေပြီဆိုရင်တော့ Kim Kardashian ကိုသတိရလိုက်ပါ။ အချိန်တိုအတွင်းမှာ ဆွဲဆောင်မှူရှိရှိနဲ့ လှနေစေမယ့်ဆံပင်ပုံစံလေးပါပဲ။ ဆံပင်ကို အလယ်တည့်တည့်ခွဲ ဆီလေးနည်းနည်းနဲ့သေချာဖိပြီး ပုံဖော်ထားတဲ့ ဆံပင်အလယ်ခွဲပုံစံဟာ မိန်းကလေးတွေအတွက် ဘယ်တော့မှမရိုးနိုင်တဲ့ Hairstyle တစ်ခုလို့တောင်ဆိုနိုင်ပါတယ်။
5. ဆံပင်တိုတို ဆံသားကောက်ကောက်
ဆံပင်တိုတဲ့ မိန်းကလေးတွေအတွက်အသင့်တော်ဆုံးကတော့ wave ကြီးကြီးကောက်ထားတဲ့ ဆံပင်ပုံစံပါပဲ။ ဒီလိုဆံပင်ပုံမျိုးက ဆံပင်တိုတဲ့သူတွေတင်မဟုတ်ပဲ ဆံပင်အရှည်သမားတွေပါအရွေးမမှားနိုင်တဲ့ ပုံစံမျိုးပါ။ ဆံပင်ကို ကောက်စက်နဲ့ခပ်ပြေပြေလေးကောက်ပြီး hair spray ခပ်ပါးပါးဖြန်းထားရုံပါပဲ။ သွားရင်းလာရင်းလည်း လက်လေးနဲ့ ထိုးထိုးဖွပြီး ကောက်သားပြန်ပေါ်အောင် လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီဆံပင်ပုံလေးနဲ့ နှုတ်ခမ်းနီပန်းရောင်နုနုလေးဆိုထားမယ်ဆို အရမ်းကိုချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေမှာ ကျိန်းသေပါ။